Mos GO: Batariya dibadeed oo lagu soo dallaco Mac-gaaga? | Waxaan ka socdaa mac
Javier Labrador | | dhowr
Marka la eego furaha cusub ee Apple, oo la filayo inuu noqdo bisha Oktoobar ee soo socota, si loogu soo bandhigo MacBooks cusub, Soy De Mac waxaan kuu soo qaadaneynaa wax faa iido weyn u leh si aad ugu adeegsato laptop-kaaga guriga ama shaqada.
Waxay ku saabsan tahay cusub Mos Go, hal batari dibadeed oo leh awood badan oo lacag-bixin ah, oo si gaar ah loo soo saaray si loogu dalaco laptop-keena nooca loo yaqaan 'Californian laptop', maadaama ay leedahay USB-C.
In kasta oo aysan weli jirin taariikh rasmi ah oo ganacsi, sababo la xiriira wax ka beddellada lagama maarmaanka u ah qalabka iyo qalabka guryaha qaarkood, waxaan jeclaan lahayn inaan sameyno dib u eegis yar kuwaasoo loo qoondeeyay inay noqdaan habka cusub ee lagu dalaco kumbuyuutarrada mustaqbalka.
Batarigan banaanka ah looma adeegsan doono oo keliya Mac-gaaga, laakiin sidoo kale qalab kasta oo aad isticmaasho, kiniin, taleefannada casriga ah, iwm ... Si kastaba ha noqotee, maadaama ay ku jirto isku xiraha USB-C, waxaa badanaa lagu taliyaa Apple MacBook-ka cusub. Sidoo kale, aaladdu waxay aqoonsaneysaa aaladda ay ku xiran tahay, iyo waa maxay xawaaraha amarka ugu fiican iyo awoodda qalabka la sheegay, si ay si buuxda ula qabsato iyadoon loo eegin waxa aan ku xirnay. Tani, mustaqbalka fog, waxay ka fogaan doontaa dhibaatooyin badan oo ku saabsan xirashada batteriga qalabkayaga.
Mid ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ayaa ah, sida caadiga ah, baytariyadu waxay u muuqdaan inay leeyihiin awood ugu badnaan la keeno oo lagu dejiyo 15W. Sida iska cad, awoodani kuma filna Mac, taas oo ah wuxuu la shaqeeyaa awooda ilaa 29W (adabtarada gidaarku wuxuu ku shaqeeyaa awooddaas). Sidaa darteed, baytarigan waa mid gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, khidmadda uu baytarigan na siinayo ayaa waxyar ka dhakhso badan isku xidhka kumbuyuutarka xoogga guriga ama xafiiska. Dhammaantood waa faa'iidooyin.
Xagga faa'iidooyinka, baytarigu wuxuu leeyahay 12.000 Mah, taas oo noo qalantaa inaan ku dhejinno MacBook hadda jira oo ka sarreeya 80% awoodeeda. Waxay sidoo kale leedahay wax soo saar USB caadi ah si ay ugu adeegsato aalado aan lahayn USB-C.
Malaha cilladaha ugu weyn ee safarkan xiisaha badan noqo, sida had iyo jeer, qiimaha: ilaa $ 120. Sidoo kale, weli lama heli karo iibsashada, sababtoo ah cilladaha laga helay wajiga tijaabada ugu dambeysa ee ku saabsan qalabka loo yaqaan 'firmware', sidaa darteed weli waa inaan sugnaa.
Xaqiiqdii waxay noqon doontaa diyaar u ah iibsashada ka hor dhamaadka sanadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Mos GO: Batariya dibadeed oo lagu soo dallaco Mac-gaaga?
Hi Javier, aan aragno haddii aad ka jawaabi karto su'aal aan qabo .. Haa, tusaale ahaan waxaan haystaa MacBookkeyga oo 100% lacag ah iyo batteriga dibadda oo ah 0% waxaanan ku xiraa iyaga oo isticmaalaya fiilo USB-C ah oo leh borotokool 3.1 ah, I fahamsanahay in MacBookga uu igu soo dallacayo batariga dibedda (arrinta DRP). Marka, goormee baytariga dibedda beddeli doonaa doorka kumbuyuutarka oo uu bilaabi doonaa inuu noqdo xeedho oo uusan u noqon qalab?
Miyaad heli kartaa dhibic isku dheelitiran oo aad midba midka kale ku dallaco?
Ku jawaab Roger
Apple Watch cusub ayaa durbaba la iibiyaa waana kuwan astaamaha ugu muhiimsan